कथाः गलफन | Purna Oli Free songs
Home / कथा / कथाः गलफन
Posted by: Purna Oli in कथा May 26, 2019	0 438 Views
“छिटो कयनपानी गैहाल्, गारापारेका डिङाबाछा ग्वालाबाट फर्किने बेला भो, बारीमा पसे भने माटोढुङ्गो केही बाँकी राख्तैनन् ।” आमाले मलाई हकार्नुभयो । कयनपानी खोल्साको छेउमै रहेको हाम्रो बारीमा गाईवस्तु पस्नबाट जोगाउने काम सधैँ ठूल्दाइको हुन्थ्यो, पहिलोपटक हुनुपर्छ, ती गाईवस्तु छेक्न आज म खटाइएँ । आमाको आज्ञा शिरोपर गर्दै म भीमलको घोचो समातेर कयनपानीतिर हस्याङफस्याङ गर्दै उक्लिएँ ।
दमदमेतिर हल्लाखल्लाको स्वर बढ्दै जान्छ र त्यो दमदम झन्झन् प्रष्टिँदै छ । म चनाखो हुँदै त्यतातिर हेर्छु, दमदमेबाट सातआठवटा गाईगोरु र पन्ध्रसोह्रवटा भेडाबाख्रा लाम लागेर ग्वार्ग्वार्ति यतैतिर झरिरहेका छन् । अघिअघि पाठाहरु बुर्लुक् बुर्लुक् सुन्दर नृत्य गरिरहेका छन् । गाईवस्तुको ग्वार्ग्वार् आवाजले मीठो संगीत भरिरहेको छ । हेर्दाहेर्दै भेडाबाख्राले आफ्नो गति तिब्र पार्दै गाईगोरुसँगको दुरी बढाउन थाल्छन् । अघिल्तिर कुद्न थालेका भेडाबाख्रालाई छेक्न आठनौ वर्षकी एउटी पातली केटी गाईगोरुको पछिल्तिरबाट अगाडि झुलुक्क झुल्किन्छे र पाठाहरुसँगै तलतिर कुद्न थाल्छे फिरफिरफिरफिर बुर्लुक्-बुर्लुक् । उसले निकालेको मसिनो स्वर कान चिरेर मेरो भित्रभित्रसम्म पुग्छ “छ्यो ! छ्यो ! पख् ! पख् ! हुर्र्‍या ! हुर्र्‍या !”
साँच्चिकै पुतलीभन्दा फरक छैन त्यो केटी । सिन्का जोडिएकाजस्ता खुट्टा । कटिभन्दा तलबाट घुँडासम्म बेरिएको दुई हाते छिटको गुन्यू । एकबित्ताको पातलो जिउमा टम्म कसिएको छिटकै बुलोज । काँधलाई छुँदै र हावामा नाच्दै गरेको छोटोपातलो खैरो कपाल । कपालमा बाँधिएको रातो रिबन । जमिनमा नाचिरहेका नाङ्गा पाइतालाहरु । उसको हिँडाइ र लच्काइ दुरुस्त पाठाझैँ चकचके प्रतित हुन्थ्यो ।
“ओइ माइला ! काँ मरिस् ? ती रक्तबलले भर्खरको बाली सिध्याइसके केरै ।” आमा घरबाट ठूलठूलो स्वरले चिच्याउन थाल्नुभयो ।
तर हामीबीच केही गहिरो साइनो छ भनी मेरो परिवारका हरेक सदस्यले मलाई जिस्क्याइरहन्थे, घोकाइरहन्थे । मलाई त्यो जिस्क्याइले पटक्कै कतै छुँदैनथ्यो । शुद्ध मनोरञ्जन हुन्थ्यो मेरो निम्ति त्यो । कसैले पहिल्यै जानकारी गराइसकेको थियो कि त्यसको नाम ‘देवी’ हो र ऊ हाम्रो घरदेखि पश्चिमतिर अलि परको रातोघरमा बस्छे भनेर । मैले पनि जिस्किँदै भनिदिन्थेँ: “म त्यै राताघरकी देवीलाई ब्या गर्चु ।”
स्वतःस्फूर्त उच्चारित ‘ब्या’ शब्दले त्यो बाल्यपनको मेरो दिलज्यानमा कहीँ पनि छुँदैनथ्यो । मेरो स्वीकारोक्तिले भने आमाबाको अनुहारमा खुशीका थुप्रै रेखाहरु नाच्ने गरेको देख्दथेँ । उहाँहरुलाई खुशी तुल्याउन पनि भनिदिन्थेँ : “मलाई त्यै केटी चाहिन्छ ।”
मलाई जिस्क्याउँदा दाइ तथा दिदीहरु अक्सर भन्नुहुन्थ्यो, ” त्यो राताघरकी देवी जन्मँदा नै हाम्री आमाले ‘कान्छी बुहारी’ भन्दै धागो बाँधिदिनुभएको रे ! देवीको आमाले पनि तँलाई ‘मेरो जुवाइँ’ भन्दै धागो बाँधिदिएकी रे ! त्यो केटीसँग नै तेरो बिहे हुन्छ ।” म घरको कान्छो छोरा भएकोले पनि असाध्यै पुलपुलिएको थिएँ । अरुभन्दा बेशी नै म ठट्टाको तारो बन्थेँ । अहिले भने घरमा कान्छोभाइको आगमन भइसकेकोले म माइलो पदमा उक्लिसकेको छु ।
दाइ तथा दिदीहरुका बारम्बारको जिस्क्याहटले मलाई झिँजो लगाउँदैनथ्यो र म बेअसर हाँसिदिन्थेँ । मैले दाजुदिदीसँगै असुराका डाँठका बेहुलाबेहुली बनाएर बिवाह गरिदिएको खेल खेल्थेँ । सिन्काहरुका डिङाबाछा बनाउँथ्यौँ र सिङ भाँचिने गरी जुधाउँथ्यौँ । झिँजाहरुका घर बनाएर घरजमको खेल खेल्थ्यौँ । घर बनाउँथ्यौँ र भत्काउँथ्यौँ, भत्काइएको घर अझै राम्रो बनाउँथ्यौँ । यी खेलहरु खेल्दा हामी भरपुर रमाउँथ्यौँ । त्यो बाल्यकालमा घरजम भनेको सिर्फ एउटा मनोरञ्जनात्मक खेल हो भन्ने ठानेको हुँदो हुँ ।
त्यही सम्भावित बेहुली हुनुपर्छ गुवालीको रुपमा मेरो अगाडि प्रकट भएकी थिई एकछिन अघि । यो अरु कोही हुनै सक्दैनथी । त्यही गुवाली मुटुमा दमदमदमदम गर्दै भर्खरै गई । उसले राम्रैसँग बुझाएर गई कि ऊ सिर्फ असुराकी खेलौना होइन । त्यति मात्र कहाँ हो र ? शरमले झुकेका राताराता नजरले भित्रैसम्म चिमोटेर गई । मीठो दुखाई बल्झाएर गई । मोहक आकर्षण छोडेर गई ।
म खितितिति हाँस्न पुगेछु, ऊ फर्किएर मलाई कर्के चिहाई । मेरो मुटुको धड्कन झन् झन् बढ्न थाल्यो दमदमेजस्तै दमदम दमदम । ऊ जिस्काएको ठानी रिसाउली भन्ने डरले सासलाई थाम्दै तुरुन्तै भनिहालेँ, “सँगै गए हुँदैन ?”, मेरो पहिलो वाक्य फुत्क्यो उसको लागि ।
उसको पनि प्रश्नबोधक पहिलो वाक्य फुत्कियो मेरो लागि पनि, “किन र ?”
‘किन’ को जवाफ मसँग पनि कहाँ थियो र ? मर्दले मर्दानाको ‘किन’ को जवाफ नदिई पनि सुख्खै थिएन । म हतप्रभ उभिएँ र किशोर मानसपटलभरि खोजेँ जवाफ । किन ? किन ??….??…… मुटुतिर बढिरहेको दमदमले गर्दा ‘किन’ को जवाफ ओझेलमा पारेको थियो र सजिलै भेट्टाउन मुश्किल भैरहेको थियो ।
मैले उसको कठिन ‘किन’ को जवाफ दिनुको सट्टा स्वरलाई सक्दो नरम तुल्याउँदै सजिलो प्रश्न सोधेँ : “त्यो के हो ?”
उसले अझै नरम र मसिनो स्वर पार्दै जवाफ दिईः “गलफन !”
म मन्त्रमुग्ध हुँदै उसलाई हेरेको हेरेकै भएछु कि उसैले नसोधेको प्रश्नको अलिकति ठूलो स्वरमा जवाफ दिईः “यो मेरो ठूल्दाइको लागि हो ।”
“हो ?” मेरो मुखबाट बाँकी शब्द निस्कन सकेन ।
मैले हतारिँदै पुनः सोधेँ, “सँगै गए हुँदैन ?”
उसले उही कठीन प्रश्न मतिर फ्याँकीः “किन र ?” अनि बाटोमै एकैछिन अल्झिई । उसले बारम्बार आफ्नो प्रश्नको जवाफ मबाट खोजिरहेकी थिई । एउटी ठिटीको दुईदुईवटा प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नु यस्तो पनि कतै हुन्छ ?
मैले आफूलाई सम्हाल्दै जवाफ दिएँ, “गलफन !”
उसले हत्तपत्त भनिहालीः “गलफन ? ऊन ल्याइदिनु, म बुनिदिउँला ।”
यति भन्दा नभन्दै ऊ खुरुरुरुरु भागी हाली । मैले ऊ भागिरहेको ध्यानमग्न हेर्दै थिएँ, पछिबाट कसैले ध्यान भङ्ग गरिहालेः “आज त तिमी नै अघि आएछौ !”
जो पछि आयो उसैले भन्न मिल्थ्यो यो वाक्य । तर यो वचनले मलाई अभूतपूर्व घोचिदियो, ‘म अघि लाग्न नपाइने कुन विधानमा लेखिएको छ र ? मलाई पछि परेको हेर्न चाहन्छौ तिमी ?’ तर भन्न सकिन, किनकि उनी मेरा निकटतम साथी थिए । साथी मात्र कहाँ थिए र ? उनी त त्यही भागिरहेकी केटीका ठूल्दाइ पो थिए !
अबचाँहि घरबाट सधैँ सबेरै निस्कन थालेँ, आफ्नो साथीलाई पछि पार्ने हेतुले । खोइ ? त्यही केटीलाई भेट्टाउन पो हो कि ? दुवै पनि हुनसक्थ्यो ! साथीले बिहे पनि गरिसकेका थिए । मनमा खेल्थ्यो, विवाहित र अविवाहितबिच पनि काँहि मित्रता भैरहन्छ र ? अनि मेरो मन उनीदेखि तर्कन खोज्थ्यो । उनी अझै मसँगै नजिकिन खोज्थे ।
फलस्वरुप कलेजको निहुँ बनाई म अझै बिहान घरबाट निस्कन थालेँ । यसले के फाइदा भयो भने अब त्यो केटीको हातमा मेरै लागि बुनिइरहेको गलफन (गलबन्दी) बिहानबिहानै देखिन थाल्यो । त्यो गलबन्दीमा निला र सेता पाटा थपिँदै थिए र झन् झन् लामो हुँदै थियो । झन् झन् सुन्दर पनि ।
उता आफू एक्लिने भयले केटीका ठूल्दाइ पनि झन् झन् बिहान निस्कन थाले । उनको गलामा पनि त्यही केटीले बुनेको गलबन्दी बेरिएको थियो र मेरो गलामा पनि दुरुस्तै उस्तै गलबन्दी बेरिएको हुन्थ्यो । फरक त थियो त उनको गलबन्दीमा रातो रङको पाटा पनि थियो, मेरो गलबन्दीमा सेतो र निलो रङ मात्र थियो । उसको हातमा ऊन थमाइदिँदा उसैले सोधेकी थिईः “रातो ऊन खोइ त ?’
मैले भनेको थिएँ, “मलाई रातो मन पर्दैन !”
उसले उही कठीन प्रश्न सोधेकी थिईः “किन र ?”
कलेज पढ्दा पढ्दै मैले रातामाटा स्कूलमा शिक्षकको जागिरी भेट्टाएँ । रातामाटाबाट सोलाबाङको स्कूलमा पढाउन थालेँ । स्थायी भएपछि कैलदेऊ पुगेँ, जहाँ त्यही केटीको माइलादाइले पढाउँदै थिएँ । पढाइको कारण उसको ठूल्दाइ मेरा निकट साथी छँदै थिएँ, जागिरीको कारणले अब म उसको माइलादाइको पनि निकटको साथी बन्नपुगेँ । सम्भावित जीवनसाथीका दाइसँग हुने साथको अनुभूति अरु साथीभाइसँग हुने साथजस्तो हुँदैनथ्यो । अलि भिन्न, अलि जोखिम, अलि सतर्क र अलि रोमाञ्चक !
त्यतिबेला स्कूल वा कलेजका पाठ्यपुस्तकहरु सितिमिति नपाइने मुसिकोटमा प्रकाश कोवित र युधिर थापाका प्रेमिल उपन्यासहरु सजिलै पाइन्थे । लालहिरा, मधुमालती, मुकुन्दइन्दिरा आदि पहिल्यै पढिभ्याइसकेको थिएँ । म उपन्यास पठनमा यति ध्यानमग्न हुन्थेँ कि गाईबाख्रा भागेर कसैको बारीमा पसिसकेको सुइँपत्तो पाउँदैनथेँ । ऊ म पढिरहेको ठाउँसम्म आइपुग्थी र मभन्दा अलिकति पर टुक्रुक्क बसेर लोभिँदै मैले पढेको हेरिरहन्थी । चाहना थियो होला, ‘म पनि यस्तै उपन्यासहरु खुरुरुरु पढ्नसक्ने भैदिए !’ वा त्योभन्दा अघि बढेर सोच्थी होली, ‘आफूसँग पनि त्यो क्षमता भैदिए माया साट्ने यो खेलमा कति सुगमता आउँदो हो !’
त्यसो त हामीबीचको सम्बन्धमा पढाइको अन्तरले कुनै भाँजो हालिसकेको थिएन । पढाइको अन्तर खासै के थियो र ? ‘लाल’ बन्दै गएको म र ‘हिरा’ बन्दै गएकी उसमा के नै तात्विक अन्तर थियो र ?
हाम्रो उमेर पनि दिनदिनै चढ्दै गएकोले हामीलाई ताकेर विवाहका प्रस्तावहरु नआउने कुरै थिएन । मकहाँ आएको प्रस्तावको चियोचर्चा गर्थी ऊ । ओठ पिलपिल पार्दै स्पष्टीकरण सोधिहाल्थीः “हिजो तपाईँको घरमा पाहुना आएका थिए रे नि ? के भन्नुभो बाआमाले ?”
“पढ्दैछ छोराले भन्नुभो नि, अरु के भन्नु ?” मेरो स्पष्टीकरणले ऊ ढुक्क हुन्थी ।
ऊकहाँ आएका प्रस्तावहरु पनि सहजै थाहा पाउँथेँ मैले । मैले पनि स्पष्टीकरण सोधिहाल्थेँ, उसले भन्थी, “हुन्न भनिदिएँ नि । अरु के भन्नु ?” उसले पनि मलाई विश्वस्त तुल्याउँथी ।
मैले आइए सकेपछि बिए पढ्न काठमाण्डौतिर हानिएँ । मसँगै उसले बुनिदिएको ‘गलफन’ पनि काठमाण्डौ आइपुगेको थियो । काठमाण्डौको कलेजको शुरुको दिन त्यही गलफन गलामा बेरेर कक्षामा पुगेँ । अलि बढी नै पाखे देखिएछु कि ? सहपाठीहरु मलाई देखेर गलललल हाँसिदिए । त्यसदिनदेखि त्यो गलफन डेराको ह्याङ्गरमै झुण्डिइराख्यो ।
आमाले बेलाबेला दूर संचार पुगेर फोन गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले मेरो सन्चोबिसन्चो सोधिसकेपछि सोध्न बिर्सन हुन्नथ्यो, “के भनिदिने हो गारापारेका परललाई ? छिटो बाटो देऊ भन्छन् ।” बदलामा मैले केही जवाफ दिन सक्दिनथेँ । धेरै झिज्याएपछि भने भनिदिन्थे, “राम्रो केटो आए दिए भैहाल्यो त ! मैले रोकेर राखेको छुइन क्यारे !”
त्यसबेलाको जमानामा गाउँका तेह्रचौध उमेरका सबैजसो केटीको घरजम भैसक्थ्यो । उसले त सोह्र वर्ष पार गरिसकेकी थिई, जुन विवाह गर्ने उमेरभन्दा धेरै ढिला भैसकेको ठानिन्थ्यो । सायद, ‘कुर्दा कुर्दा पोई नपाएरै यो बूढिने भई !’ भनेर उसकी साथीसंगिनीले हैरान पारिरहेका थिए होलान् उसलाई ।
काठमाण्डौका सहपाठीहरुले पनि ‘गलफन’ शब्द प्रयोग गर्दा म झुक्किएको थिएँ । पछि थाहा पाएँ, गर्लफ्रेन्डलाई ‘गलफन’ भन्दा रहेछन् । प्रायः विद्यार्थीहरुका एकएक ‘गलफन’ हुन्थे । नभएकाले ‘गलफन’ छनोट गर्न कम्मर कसेका भेटिन्थे । त्यति नगरे पनि बाँकीको गफमा ‘गलफन’ले नै प्राथमिकता पाउने उमेर थियो त्यो । मैलेचाँहि त्यही गलफनलाई नै गर्लफ्रेन्डको प्रतिकको रुपमा लिएँ । आफैसँग गलामा झुण्डिएर आएको गलफनसँग निशब्द वार्तालाप गर्न थालेँ । गलफनको निलो र सेतो रङबिचमा लाल रङ पनि भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । अनुहार लाललाल तुल्याउँदै बोलिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो त्यो गलफन् । रातो रङको चाहना बढ्दै गएको थियो ममा ।
बेलाबेलामा फोन सम्पर्क भयो कि आमाबाले दोहोर्‍याइतेहर्‍याइ त्यही प्रश्न सोध्नुहुन्थ्योः ‘के भनिदिने हो तिनीहरुलाई ?” पढाइ एकातिर थियो, अर्कोतिर त्यही प्रश्नले मनमा झुत्ति खेल्दथ्यो । घरि ‘पर्खन नसक्ने भए पोइल गए भैहाल्यो त !’ भन्थ्यो, घरि, ‘एक वर्ष पनि पर्खन नसक्ने के भाको होला ?’ भन्थ्यो ।
दिनमा खेल्ने मनले भन्थ्यो, ‘मैले आफ्नो भविष्य उज्ज्वल तुल्याउन शिक्षित केटी नै खोज्नुपर्छ । यसले मेरो जीवन पनि सहज हुनेछ र बच्चाको भविष्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’ जब साँझ पर्थ्यो, ह्याङ्गरमा झुण्डिरहेको गलफन सर्दैसर्दै आँखामै झुण्डिन आइपुग्थ्यो । आफ्ना इतिहासका पानाहरु फरररर पल्टाएर मलाई हैरान पार्थ्यो, त्यो रोमाञ्चक विगत झलझली सम्झाइदिन्थ्यो, ताजा पारिरहन्थ्यो । आफ्नै मनलाई ढाढस दिँदै भन्थेँ, ‘उसले सपनाको राजकुमार मलाई नै छानिसकेकी होली । उसलाई नअपनाउनु उसको मनमा ठेस लाउनु हो, धोखा दिनु सरह हो । उसले पढिन भन्ने आधारमा मात्र उसलाई छोडिदिनु न्यायसँगत होइन । उसले त आजसम्म पर्खिरहेकी नै छ नि !’
घर फर्किएपछि पुराना डोबहरु खोज्दै मैले कैयौँचोटी कयनपानीतिर ओहोरदोहोर गरेँ । बाल्यकालमा घरबाट निस्कियो कि पाखापखेरामा देखिइहाल्ने ऊ यसपटक मेरो नजरमा कतै परिन । उसको अभाव मलाई खट्किए पनि मेरो अभाव उसलाई खट्किन छोडेछ । मैले के बुझेँ भने हाम्रो प्रेमिल सम्बन्धमा आकाशपातालको फरक परिसकेको रहेछ । लाग्यो, म गाउँमा फर्किएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि उसले मलाई पटक्कै बालमतलब दिइन । न उसका बाआमा मलाई भेट्न आए, न त उसका दाजुहरु नै ।
काठमाण्डौमा छँदा फोनमा बारम्बार त्यही केटीको प्रसंग झिक्ने मेरा आमाबाले पनि घर फर्किइसकेपछि त्यो प्रसँग निकाल्दै निकाल्नुभएन । यसले गर्दा मनमा अरु उच्चाट बढ्यो, अरु छट्पटी बढ्यो । मेरो पालो मैले पनि गलाबाट निकालेर कोठाको घुगुतीमा टङ्गाइदिएँ गलफन्-सलफन् ।
दिलबारीमा हुर्किएको प्रेमिल बीरुवालाई निरन्तर मलजल पुर्‍याउन नसक्नु मेरै कमजोरी हो भनेर मनलाई तेह्रौँ गरेर सम्झाए पनि मनले मान्दै मानेन । बरु डाहा, क्षोभ र घृणाको ठूलै भारी भिराइदियो । त्यसैको भारीको मारवश् अकस्मात् आमाबालाई भनिदिएँ: “त्यस केटीलाई म बिहे गर्दिन ।”
“के भयो र ? उनीहरु तेरै लागि पर्खिरहेका छन् ।”
“जोसुकैलाई पर्खोस्, म मरिकाटे त्योसँग बिहे गर्दै गर्दिन ।”
“हामीलाई के घुर्क्याउँछस् त ? भन् गएर उसैलाई । भन् उसैका आमाबालाई । तेरो खुशी नै हाम्रो खुशी हो बाबै ।”
भोजनग्रहण गराइसकेपछि उसको परिवारका सबै सदस्यहरु मलाई चौतर्फी घेरा हालेर बसे । प्रसंग निकालियो विवाह गर्न ढिला भैसकेको । मैले छिटो निर्णय दिनुपर्ने भाव थियो छलफलको । म केहीबेर मौन रहेँ । चौतर्फि प्रश्नका झटाराहरु ओइरिइरहेको बखत मौन बसिरहनु कहाँ सम्भव थियो र ? उनीहरुलाई टार्न मैले ‘तपाईँहरुकै छोरीबैनीसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्छु !’ मात्र भन्नसकेँ ।
मैले सम्हालिँदै भनेँ: “के गर्ने ? तिम्रो घरपट्टि र मेरो घरपट्टिले मलाई बसिखान दिएनन् ! सक्छ्यौ मेरो घर गरी खान ?”
उसले मेरो जवाफको सट्टा ऊही पुरानो प्रश्न सोधीः “किन र ?”
म उसको ‘किन’ मा अल्झिनुपर्ने अवस्था थिएन, अतः मैले नै सोधेँ, “अब झ्याँइँकुटी पार्ने ढिला भैसक्यो रे ! सक्छ्यौ ? मेरो घर सम्हाल्न ?” मेरी कुशल जीवनसंगिनी बन्न उसले के के योग्यताहरु हासिल गरेकी छ भनी बुझ्न चाहेँ मैले ।
ऊ केहीबेर अलमलमा परी । अनि गम्भीर देखिई र निर्धक्क रुपमा जवाफ दिँदै गई “किन सक्दिन ? के कमजोरी छ ममा ? घाँस काट्न सक्छु, दाउरा चिर्न सक्छु, रुख चढ्न सक्छु, रोटी थेच्न सक्छु । बच्चा जन्माउन र हुर्काउन पनि सक्छु । अरु आईमाईले जसरी घर खाएका छन्, त्यसरी नै म पनि घर गरी खान सक्छु । सबैभन्दा ठूलो कुरा तपाईँलाई कसैले दिननसक्ने धेरैधेरै माया दिन सक्छु । अरु के चाहियो तपाईँलाई ?”
म छक्क परेँ, अरुलाई दिएर रित्त्याइसकेकी होली भनेको त आज पर्यन्त मेरै लागि एक डबका माया जोगाएर राखेकै रहिछ । माया शब्दले म द्रविभूत हुनथालेँ । भित्रभित्रै पग्लिएर गल्न थालेँ । प्रकटमा भने अझ कठोर बनेको नाटक गर्दै पुनः सोधेँ “आजको जमानामा घर सम्हाल्न त्यतिले मात्र पुग्छ र ?” मेरो सोधाइको तात्पर्य थियो, ‘पढाइ चाहिएन ?’
उसले जवाफ दिन खोजी, ‘मसँग पढाइको कमी भयो र त तिमीजस्ता पढेलेखेकालाई रोजेकी नि । म तिमीलाई पाएर पूर्ण हुन चाहन्छु ।’
उसको प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रतिउत्तरले म यसरी मर्माहत भएँ कि मैले ऊसँग हारेँ । मेरो अभिमानले अग्लिएको शिर निहुरमुन्टी ‘न’ को अवस्थामा पुग्यो । मेरो बनीबनाउ निर्णयलाई त्यहीँ च्यातुचत पारिदिएँ ।
मैले फैसला सुनाइदिएँ: ‘उसले ‘मसँगसँगै जाने’ निधो गरेकीले बाँकी जीवनमार्गमा म पनि ‘ऊ सँगसँगै पाइला चाल्न तत्पर छु ।’
हाम्रो पहिलो बोलचालमा मैले सोधेको थिएँ: ‘सँगसँगै गए हुँदैन ? उसले उल्टै मलाई सोधेकी थिई, “किन र ?”
उसको पहिलो प्रश्न ‘किन र ?’ को मुखभरिको जवाफ पाई उसले आज । अब मैले ‘सँगसँगै जाउँ !’ पनि भन्नु परेन र उसले पनि ‘किन र ?’ भनी सोध्ने आवश्यकता बाँकी रहेन । उसले मलाई सम्पूर्ण रुपमा प्राप्त गर्ने भई । यसले ऊ औधि खुशी देखिई । उसको खुशीले उसको सपरिवार खुशी भयो, त्यो खुशीको माहोलमा म खुशी नहुन कहाँ सम्भव थियो र ?
म भोलिपल्ट कोशेली स्वरुप सुन्दर सपना बोकेर घर फर्किएँ । मनमा उम्लिएको घृणा र क्षोभ बिलाइसकेको थियो । मनको धुलोमैलो पखालिइसकेको थियो । मलाई देखेर हतार हतार आमाले सोध्नुभयोः “भनिस् त बिहे गर्दिन भनेर ? के भनिस् ?”
आमाको अघि पनि म निहुरमुन्टि ‘न’ नै भएँ । बिस्तारै नकारात्मक टाउको हल्लाउँदैँ भनेँ : “बिहे गर्छु भनिदिएँ ।” आमाले मेरो निर्णय सुनेर हत्तपत्त अँगालोमा बेर्दै भन्नुभयो, “मलाई पहिल्यै थाहा थियो कि तैँले यही निर्णय गर्नेछस् भनेर । आमा हुँ, छोराको दिल किन चिन्दिनथेँ !”
आखिर मेरी जन्मजात गर्लफ्रेन्ड (गलफन) सँगै मेरो बिहे धुमधामसाथ पञ्चेबाजा बजाउँदै सम्पन्न भयो । बिहेकै दिन मात्र थाहा पाएँ कि उसको नाम ‘देवी’ नभएर ‘देवकुमारी’ पो रहेछ !
त्यो निर्णायक दिनको मेरो प्रश्नले ऊभित्र चिथोरिएको घाउ पुरिएको थिएन । घाइते तुल्याइएको मेरी प्यारी ‘गलफन’ को दिलमा मलहम लगाइदिनु नै थियो मैले । बिहेको केही वर्षपछि उसलाई मैले स्कूल भर्ना गरिदिएँ । उसले प्राथमिक कक्षादेखि शुरु गरेर दश कक्षासम्म पढिसिध्याई । उसले एसइइ पनि ‘बि प्लस ग्रेड’ मा पास गरी । अहिले ऊ कलेज जाने तर्खरमा छे ।
उसले मेरै किशोरवय जस्तै कलेजी कल्पनामा भुलेर कलेज सिध्याओस् ! यो तीसौँ वैवाहिक वर्षगाँठको शुभकामना !
Next: ठूली, ठूला र ठालु